मानिसहरु आजभोलि एक्लै अथवा एकल परिवारमा रमाउन थालेका छन, श्रीमान्, श्रीमती र छोराछोरी । हजुरबुबा, हजुरआमाको चलन बिर्षन लागिसक्यो नेपाली समाजले । बुढेसकाल लागेका बाबुआमालाई एक्लै छाडेर छुट्टै बस्नेहरुलाई यो एउटा उदाहरण हो । परिवारमा खुशी हुनलाई २,४ जना बसेर मात्र सकिदैन । मन हो ठूलो कुरा हेर्नुहोस.....
काठमाण्डौको गोङ्गबु बस पार्क बाट बानियाँ टार रोड भई २.३ कि.मी. दक्षिण तर्फ लागेपछी आउँछ सुखावती स्टोर । त्यो पसल हेर्दा सामान्य पसल जस्तो देखिन्छ । यहाँ किताब, कपडा, भाँडाकुँडा र कम्प्युटर देखी अन्य धेरै उपयोगमा आउने बस्तु सामाग्री राखिएको छ । अरू पसल भन्दा यो पसल यसका रणले गर्दा भित्र छ कि यहाँ भएका सामाग्रीको.....
आजकाल स–सानो कुरामा सम्बन्ध टुट्ने स्थितीमा पुग्छ । सम्बन्धविच्छेदका विभिन्न किस्सा त तपाईंले सुन्नुभएकै होला तर मध्यप्रदेशको पारिवारिक अदालतमा सम्बन्धविच्छेदको एउटा यस्तो मामला सार्वजनिक भएको छ जसले तपाईंलाई आश्चर्यमा पार्नेछ । सम्बन्धविच्छेदको निवेदनमा श्रीमतीले श्रीमानको रहन–सहन चित्त नबुझेको.....
काभ्रेमा थुन नभएको गाईले बाच्छा पायो !
काभ्रे जिल्लाको बेथानचोक गाउँपालिका–३ ढुङ्खर्कमा थुन नभएको गाईले ब्याएको छ । ढुङ्खर्कका केदारनाथ सापकोटाले पालेको थुन नभएको गाईले बाच्छा पाएकाे हाे । गाईले बहर खोजेपछि पशुप्राविधिक बोलाएर कृतिम गर्भाधान गराएको सापकोटाले बताए । उनलाई पहिले गाईको थुन नभएकाे बारे थाहा नपाएकाे बताए । ‘ब्याउनुभन्दा केहीअघि.....
पत्याउनु हुन्छ ! स्कुल बन्द हुने भएपछी १ किसानले १५ भेडालाई भर्ना गराए ! (भिडियो हेर्नुहोस)
फ्रान्सका एक किसानले आफ्ना १५ वटा भेँडालाई स्थानीय विद्यालयमा विद्यार्थीका रुपमा भर्ना गरेका छन् । विद्यार्थीको संख्या कम भएको भन्दै प्रशासनले एउटा कक्षा बन्द गर्ने योजना बनाएपछि ती किसानले आफ्ना १५ वटा भेँडालाई विद्यार्थीका रुपमा भर्ना गरेका हुन् । ग्रेनोब्लेको उत्तर पूर्वमा रहेको जुएलस फेरी प्राइमरी.....
अझै चल्दैछ यस्तो प्रथा: जहाँ आमाको सौता बन्न छोरीहरुलाई बाध्य पारिन्छ ! विवाहको प्राचीन कालदेखि चलि आएको एउटा संस्कार हो । विश्वकै पहिलो लिखित ग्रन्थ मानिने ऋग्वेदमा सूर्य र सूर्याको प्रसङ्गमा विवाह संस्कारका सबै वैदिक मन्त्र उल्लेख गरिएका छन् । विवाह संस्कारसँग सम्बन्धित सबै क्रिया कलाप ऋग्वेदमा उल्लेख.....
श्रीमती सुन्दरी भएपछी श्रीमानलाई पर्‍यो आपत
रसियाको एक गिर्जाघरका पुजारीकी श्रीमतीले स्थानीय सौन्दर्य प्रतियोगितामा उपाधि जितेपछि स्थानीय बासिन्दा तथा गिर्जाघरका अन्य पुजारीले उनलाई गिर्जाघर प्रवेशमा रोक लगाएका छन् । ३१ वर्षीय पूजारी सर्गिए जोटोभकी श्रीमती ३२ वर्षीया ओस्काना जोटोभाले स्थानीय रूपमा आयोजित ‘मिस सेक्सुयालिटी’ प्रतियोगितामा.....
अचम्मको देश ! जहाँ हरेक बर्ष पर पुरुष संग यौन सम्पर्क गर्न श्रीमानले नै गर्छन सहयोग
इन्डोनेसियामा एउटा अनौठो परम्पराले जरो गाडेको छ। त्यहाँ हरेक वर्ष महिलाहरूले अपरिचित पुरुषसँग यौन सम्पर्क कायय राख्छन्। अझ रोचक त के छ भने विवाहित महिलाले कुनै अपरिचित पुरुषसँग यौन सम्बन्ध कायम गर्ने क्रममा उनीहरूका श्रीमानले समेत सहयोग गर्छन्। यो चलन १६औं शताब्दीदेखि चलिआएको हो। आज प्रकाशित साप्ताहिकमा.....
१ स्कुलका ७ शिक्षिका एकसाथ गर्भवती भएपछी (भिडियो हेर्नुहोस)
एजेन्सी : कहिलेकाही यस्तो घटना सार्वजनिक हुन्छ की त्यो योजनाबद्ध थियो वा संयोगबस भन्ने जिज्ञासा नै उत्पन्न हुने गर्छ । यस्तै भयो अमेरिका स्थित एक स्कुलमा । कन्सास राज्यमा रहेको ओक स्ट्रीट स्कुलमा अध्यापन गराउने ७ जना शिक्षिकाहरु एकसाथ गर्भवती भएका छन् । सो स्कुलमा १४ शिक्षिका रहेकामा आधारले मातृत्व.....
मंगलबार, पाल्पाका डा. सन्तोष नेपाल सधै झै अफिसको काम सकेर घर फर्किने तयारीमा थिए । फर्किने क्रममा उनले अनलाईनबाट आफ्नो बैंक एकाउन्ट चेक गरे । उनको नबिल बैंकमा रहेको खातामा २३,७५,९६,३३,७७६.६६ रुपैयाँ (२३ अर्ब ७५ करोड, ९६ लाख, ३३ हजार सातसय छियात्तर रुपैयाँ छैसठ्ठी पैसा) जम्मा भएको देखियो । एकछिन त अचम्मै.....